ပလပ်စတစ်ကလေးများဥယျာဉ်တူးရွင်းပြား၏ Set Tools များ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H124
ကလေးများသည် fit:5ကျော်နှစ်များဟောငျး
ပလပ်စတစ် ကလေးများဥယျာဉ် Tools များ ရှည်လျားလက်ကိုင်နှင့်အတူ, အသက်အရွယ်မရွေးအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည် 5+ သူတို့ te နုပျိုဥယျာဉ်မှူးများအတွက်အနည်းငယ်ကြီးတွေဖြစ်သကဲ့သို့။ ကလေးတွေအတွက် ဥယျာဉ်တော် Tools များ သတ်မှတ်ထားသွားထွန်ခြစ်, ပေါက်ပြားသည် ဥယျာဉ်ထွန်ခြစ် , အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်ဂေါ်ပြား, တံမြက်စည်း, ဂေါ်ပြား။ tools တွေသတ်မှတ်လေးတွေဟာကလေးတွေအတွက် perfece လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်လေးတွေရေးကိရိယာများကို item သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းအတိုင်းထားစေ optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
H124, ကလေးတွေ ဥယျာဉ်ရွက်ထွန်ခြစ် , ခြုံငုံအရှည် 980mm, option ကိုများအတွက် tool ကိုဦးခေါင်း, အမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် PP materil
H125, ကလေးတွေက ဥယျာဉ်ဟိုး , ခြုံငုံအရှည် 800mm, option ကိုဦးခေါင်း, အမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် PP ပစ္စည်း
H126, ကလေးတွေကိုသွားထွန်ခြစ်, ခြုံငုံအရှည် 860mm, ဦးခေါင်း, များအတွက် PA6 + 30% gf ပစ္စည်း option ကိုအမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်
H127, ကလေးတွေစတုရန်းဂေါ်ပြား, စုစုပေါင်းအရှည် 1000mm, option ကိုဦးခေါင်း, အမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် PP ပစ္စည်း
H128, ကလေးတွေကတံမြက်စည်း, ခြုံငုံအရှည် 920mm, option ကိုဦးခေါင်း, အမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် PP ပစ္စည်း
H129, ကလေးတွေအရွက်ပုံသဏ္ဍာန်ဂေါ်ပြား, စုစုပေါင်းအရှည် 860mm, option ကိုဦးခေါင်း, အမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်သို့မဟုတ်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် PP ပစ္စည်း
စံပြရှာဖွေနေ Set ကလေးများဥယျာဉ် Tools များ ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Big ကလေးများ ဥယျာဉ်တော် Tool ကို ကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ Long ကလက်ကိုင်တရုတ်မူလအစစက်ရုံများမှာဥယျာဉ် Tool ကို s ကိုကလေးတွေကအဘို့။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဂေါ်ပြားနဲ့ချိတ်တူးဗြိတိန် stainless ဥယျာဉ်
ရိုးရာအင်္ဂလိပ် stainless ဥယျာဉ်နယ်စပ်ရေးရာဂေါ်ပြား